Kinova vaovao an'ny beta an'ny macOS Big Sur 11.3 amin'ity indray mitoraka ity ny besinimaro | Avy amin'ny mac aho
Fampivoarana vaovao an'ny macOS Big Sur 11.3 beta amin'ity indray mitoraka ity ny besinimaro
Ny orinasa Cupertino dia tsy manakana ny milina ary androany tolak'andro dia natomboka ny macOS 11.3 beta beta ho an'ny besinimaro Sur. Ity kinova ity, izay mitovy amin'ny kinovan'ny developer dia mamela ny mpampiasa tsy manana fahazoan-dàlana hametraka azy amin'ny Mac-ny.
Ity kinova ity dia manampy fanovana maro sy zava-baovao ao amin'ny Safari, ao amin'ny Apple Music, manampy fifanarahana amin'ireo mpanara-maso ny PlayStation 5 sy Xbox, ankoatry ny fanatsarana hafa. Tsy isalasalana fa ireo kinova beta ireo dia manampy betsaka an'i Apple hamaha sy hamantatra ny olana amin'ny fomba mahomby kokoa satria maro ny tatitra.
Ny zava-dehibe eto dia ny safidin'ny mpampiasa ankehitriny ny mametraka kinova beta amin'ny fomba ara-dalàna tanteraka ary saika amin'ny fotoana iray ihany toy ny fanaon'ny mpandraharaha. Ny vaovao ampiharina amin'ity kinova beta 3 an'ny Big Sur ity misy fiantraikany amin'ny Rosetta 2 ihany koa, izany rehefa naneho hevitra izahay ny maraina mamela faritra sasany ary tsy azo ampiasaina.
Raha tadidio foana fa miasa tsara ireo kinova beta ampahibemaso ireo nefa mbola kinova beta ihany. Ka izay olana na tsy mifanaraka amin'ny fitaovana dia mety hanelingelina ny asantsika. Izay no antony tsara kokoa hatrany ny manalavitra azy ireo na dia milamina sy mandeha tsara aza izy ireo. Ny fametrahana dia atao mivantana ao amin'ny System Preferences> Fanavaozana raha tsy manana fanavaozana mandeha ho azy ao amin'ny Mac ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Big Sur » Fampivoarana vaovao an'ny macOS Big Sur 11.3 beta amin'ity indray mitoraka ity ny besinimaro
Ny loharanom-baovao dia manondro fa najanon'i Apple ny famokarana maodely iMac 4K 512 GB sy 1 TB an'ny SSD
Podcast 12 × 21: Notch na lavaka?